‘मोसोभित्र पत्रकारिताको झल्कोसँगै प्रेमको झिल्को पनि छ’ | चितवन पोष्ट दैनिक
Updated: २० मंसिर, २०७७
‘मोसोभित्र पत्रकारिताको झल्कोसँगै प्रेमको झिल्को पनि छ’
२० मंसिर, २०७७
संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अक्सिजन अभाव उच्च हुनसक्छ : सञ्चालक न्यौपाने
सम्भव भएसम्म कोरोना संक्रमितको उपचारको प्रबन्ध गरिरहेका छौँ : स्वास्थ्य प्रमुख
‘पुस्तक पढ्ने पाठकहरुले आफ्नो उपचार आफैँ गर्न सक्छन्’
नागरिक दैनिकका चितवन संवाददाता र सफल खबर अनलाइनका समाचार सम्पादक सूर्यप्रकाश कँडेलको पहिलो साहित्यिक कृति हो ‘मोसो’। चितवनमा रही पत्रकारितामा दुई दशकभन्दा बढी समय बिताएका कँडेलसँग निरन्तर चौध वर्षसम्म अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा काम गरेको अनुभव छ। त्यसअघि उनले पारदर्शी दैनिकमा चार वर्ष, चितवन पोष्ट दैनिकमा दुई वर्ष, ड्रिम्स दैनिकमा डेढ वर्ष र सबैको पत्रिका दैनिक र आदर्श समाज दैनिकमा एक–एक वर्ष सम्पादकीय भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन्। भरतपुरमा रहेका कालिका एफएम र हाम्रो एफएममा समाचार सम्पादकका रुपमा काम गरेका कँडेलले मूलधारको अनलाइन पहिलो पोस्ट र बिजमाण्डुमा समेत संवाददाता भई काम गरिसकेका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक कँडेल विगतमा चितवनबाट प्रकाशित अनावरण साप्ताहिकको सम्पादक एवम् प्रकाशकसमेत हुन्। २०५५ साल असोजमा चितवन सन्देश साप्ताहिकबाट पत्रकारिताको यात्रा सुरू गरेका कँडेल गहन समाचार र फिचर लेखनमा दख्खल राख्छन्।
विद्यालयदेखि नै साहित्य लेखन र पठनमा रूचि राख्ने पत्रकार कँडेल समाचारबाहेक गीत, गजल, मुक्तक, हाइकु र लघु कथा पनि लेख्छन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ जिल्ला कार्यसमिति चितवनका सल्लाहकार कँडेल पत्रकारिताभित्र विकृति बढ्दा चिन्तित छन्। त्यही चिन्ताको उपज हो ‘मोसो’ उपन्यास। पत्रकारबाट लेखक बन्न पुगेका कँडेलको पहिलो साहित्यिक कृति ‘मोसो’ आज शनिबार दिउँसो दुई बजे नेपाल पत्रकार महासंघ चितवन शाखाको सभाहल भरतपुरमा विमोचन हुँदैछ। युरेका पब्लिकेसनबाट प्रकाशित ‘मोसो’ उपन्यासको कथावस्तु पत्रकारितासँग जोडिएको छ। प्रस्तुत छ, ‘मोसो’ विमोचनको पूर्वसन्ध्यामा चितवन पोष्टले पत्रकार एवं लेखक सूर्यप्रकाश कँडेलसँग गरेको स्रष्टा संवाद :
१) पहिलो कृति ‘मोसो’ आज सार्वजनिक हुँदैछ, कस्तो महसुस भएको छ?
— कुनै पनि सर्जकलाई आफ्नो कृति बजारमा आउँदाको क्षण आनन्ददायी हुने गर्छ। ‘मोसो’ सार्वजनिक हुँदै गर्दाको क्षणले मलाई पनि खुसी दिएको छ। पाठकको माया पाउनेमा आशावादी छु।
२) कति समय लगाएर लेख्नुभयो ‘मोसो’?
पत्रकारिता पेसामा फुर्सद मिलाउन ज्यादै कठिन हुने गर्छ। त्यसैले, उपन्यास लेखनका लागि समय मिलाउनु निकै चुनौतीपूर्ण रह्यो। पुस्तक लेख्न सुरू गरेर पूरै सिध्याउन ठ्याक्कै तीन वर्ष लाग्यो। उपन्यास आधा लेखिसकेपछि बीचको नौ महिना त एक शब्द नलेखीकन पनि बित्यो। कहिले दिनहुँ लेख्थेँ, कहिले हप्तौँ लेख्ने समय मिल्थेन। तीन वर्ष लगाएर पनि पूरा गरिछाडेँ।
३) आमपाठकले ‘मोसो’ किन र केका लागि पढ्ने?
— उपन्यास आफैँमा एउटा बेग्लै संसार हो। त्यहाँ विभिन्न पात्र, परिवेश, घटना, वेदना, आक्रोश, द्वन्द्व, कौतुहलता हुन्छ। ‘मोसो’मा पनि यी सबै कुरा छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा ‘मोसो’भित्र एउटा ठूलो सामाजिक सन्देश छ। पत्रकार भन्दैमा सबै दूधले नुहाएका हुँदैनन्, पत्रकारिताको आवरणमा गलत काम पनि हुन्छन्, भएका छन् भन्ने सन्देश ‘मोसो’बाट पाइन्छ।
४) पत्रकारिता गर्दागर्दै साहित्य लेखनमा प्रवेश गर्ने रहर कसरी जाग्यो?
— पत्रकारितामा दुई दशकभन्दा लामो समय बिताइसकेपछि केही कुरामा असन्तुष्टि जन्मियो। पत्रकारिताको आडमा सीमित पत्रकारले गरेका नराम्रा कामले समग्र पत्रकारलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टि धमिलो हुन थालेपछि समाजको आँखामा पत्रकारिताको सही चित्र प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी बोधले पनि ‘मोसो’ लेख्न प्रेरित गर्‍यो।
पत्रकारिताको पोखरी पछिल्लो समय धमिलिएको छ । हिलो जम्न थालेको छ। त्यही हिलोको बीचमा कमलका फूलजस्ता पत्रकार पनि छन्। हिलोमा रमाउने कीरा पनि छन्। इमानको गोरेटोमा हिँडिरहेका पत्रकार कमलका फूल हुन्। बेइमानीको कमाइ गर्ने पत्रकार कीरा हुन्। यो अन्तर देखाउन पनि ‘मोसो’को जन्म हुन पुगेको हो । ‘मोसो’लाई जन्माउन साहित्य लेखनमा प्रवेश गर्नैपर्ने भएकोले म त्यतातिर तानिएँ।
५) अरुको कृति पढ्दा र आफैँले लेख्दामा के फरक हुँदोरहेछ?
— अरुको कृति पढ्दा कृति लेखन र प्रकाशनको काम सजिलै हुन्छ होला भन्ने लाग्थ्यो। अहिले आफैँले कृति लेखेर प्रकाशनको घडीसम्म आइपुग्दा पुस्तक लेखन र प्रकाशन सोचेजस्तो सजिलो हुँदोरहेनछ भन्ने ज्ञात भयो।
अर्को कुरा, अरुका कृतिमा आफूले खोजेको विषय नपाउन पनि सकिन्छ। आफूले पढ्न चाहेको कुरा कसैले लेखिदेओस् भन्ने पनि हुन्छ। त्यो चाहना पूरा नहुँदा आफैँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। आफूले लेख्दाचाहिँ आफ्नो चाहनाअनुसार लेख्न पाइन्छ, तर छाडा हुन पाइन्न। लेखनीको दायरामा रहेर आफ्नो सन्देश पाठकसामु पुर्‍याउँदा छुट्टै आनन्द आउँदोरहेछ।
६) समाचार लेखनले साहित्य लेखनमा कस्तो सहयोग पुग्दोरहेछ?
— समाचार लेखन साहित्य लेखनभन्दा सजिलो हुन्छ। समाचार लेखन प्राविधिक खालको हुन्छ। समाचार वा फिचरलाई एउटा फम्र्याटमा लेखिन्छ, साहित्य लेखन अर्को फम्र्याटमा लेखिन्छ। अझ यसरी भनौँ, समाचार लेखनको क्यानभास सानो हुन्छ भने साहित्य लेखनको फराकिलो। फराकिलो क्यानभासमा कथावस्तुका रंगहरुलाई संयोजन गरी एउटा विशाल चित्र (कृति) तयार गर्नु निश्चय नै कठिन काम हो। तर, सानो क्यानभासमा चित्र कोरिरहेको व्यक्तिलाई ठूलो क्यानभासमा चित्र कोर्न असजिलो होला, असम्भव हुँदैन। चित्र कोरिरहेको अभ्यास काम लाग्छ। मलाई पनि त्यस्तै भयो। फिचर लेखनको सीपले साहित्य लेखनमा सहयोगी भूमिका खेल्यो।
७) तपाईं यसै पनि पत्रकार, उपन्यासमा पत्रकारिता कत्तिको झल्किन्छ?
— ‘मोसो’ उपन्यासको प्रमुख पात्र रिपोर्टर हो। ऊ फिल्डमै गएर रिपोर्टिङ गर्छ। नायकको रुपमा ‘मोसो’मा देखा परेको पात्र कर्मका हिसाबले भने खलनायक बनेको छ। पैसाको लागि ऊ पत्रकारिताको आचारसंहिता नाघेर काम गर्छ। जसरी हुन्छ आफ्नै दुनो सोझ्याउँछ।
‘मोसो’मा पत्रकारिताभित्रका विकृतिको चिरफारमात्रै छैन, विभिन्न उपकथा र मूलकथासँगै जोडिएर प्रेमकथा पनि आउँछ। ‘मोसो’भित्र पत्रकारिताको झल्कोसँगै प्रेमको झिल्को पनि छ।
८) विशुद्ध साहित्यकारहरुले लेख्ने र समाचार लेख्नेहरुले लेखेको पुस्तकमा के फरक पाउनुहुन्छ?
— निश्चय नै फरक हुन्छ। साहित्य लेखनमै समर्पित साहित्यकारको कृति पढ्दा जुन साहित्यिक स्वाद पाइन्छ, त्यस्तै स्वाद समाचार लेखनबाट साहित्यमा आएकाहरुको कृतिमा पाउन सकिन्न। समाचार लेख्दा सरल भाषामा लेखिने हुनाले यस्तो अन्तर आउने हो। यो अन्तरलाई कम गर्न मैले ‘मोसो’मा निकै मेहनत गरेको छु।
९) गजल विधामा कलम चलाउने मान्छे, तपाईंबाट त पाठकहरुले गजलकृतिकै अपेक्षा गरेका थिए होलान् नि?
— साहित्यका सबै विधाको आआफ्नै विशेषता हुन्छन्। कविता, गजल, गीतले दिने मिठास कथा, निबन्ध र उपन्यासले दिन सक्दैन। कविता, गीत, गजललाई बिम्बको प्रयोगले शक्तिशाली बनाउँछ। नाटक, कथा, उपन्यासमा लेखकको सन्देशलाई वर्णनात्मक हिसाबले प्रस्तुत गरिन्छ। लेखकले कस्तो सन्देश कुन रुपमा दिन चाहेको छ? त्यसैअनुरुप विधा छनोट गर्नुपर्छ। मैले समाजलाई दिन चाहेको सन्देश गजल वा कथाबाट सम्भव नभएकोले उपन्यास लेख्नुपर्‍यो। भविष्यमा मैले लेखेका गजलहरुको सङ्ग्रह पनि बजारमा आउन सक्छ।
१०) पछिल्लो समय समाचार लेख्नेहरु साहित्य लेखनमा हाम फाल्ने क्रम बढ्दो छ। नेपाली साहित्य पनि पत्रकारहरुले नै धानिरहेका छन् भन्ने लाग्दैन?
— केही पत्रकारले आफूलाई साहित्य लेखनमा लैजाँदैमा नेपाली साहित्य पनि पत्रकारहरुले नै धानिरहेका छन् भन्न मिल्दैन। साहित्य लेख्नेहरुले नै साहित्य धान्ने हो। नेपाली साहित्यमा केही पत्रकारले साहित्यकारका रुपमा राम्रो परिचय बनाइसकेका छन्। मोहन मैनाली, नारायण वाग्लेलाई उदाहरणका रुपमा लिन सकिन्छ।
११) आगामी दिनमा साहित्य लेखनलाई निरन्तरता दिने सम्भावना कत्तिको छ?
— साहित्य लेखनको प्रमुख पाटो बजार पनि हो। बजारमा आएका कृति पाठकमाझ कति चर्चित हुन सक्छन्, त्यसले पनि साहित्य लेखनलाई मलजल गर्छ। जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मैले साहित्य लेखनलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले नै पहिलो कृति ‘मोसो’ बजारमा ल्याएको हुँ। ‘मोसो’ले पाठकको अपार माया पायो भने अर्को वर्ष अर्को उपन्यास लेख्नेछु। केही विषयवस्तु दिमागमा घुमिरहेका छन्। अहिलेलाई भने ‘मोसो’को सफलता वा असफलताले नै मेरो साहित्यिक भविष्यको निर्धारण गर्ने ठानेको छु।